ज्ञानेन्द्र मन्दिर-मन्दिर डुल्दैमा राजतन्त्र फर्किँदैन
काठमाडौँ- प्रथम गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह। उनले देखेको गणतन्त्रको सपना उनी जीवितै रहँदा पूरा भयो। अर्थात् गणतान्त्रिक नेपालमा उनी करिब चार वर्ष रहे। २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भएको थियो। सिंहको निधन २०६९ भदौ २७ मा भयो।
मुलुकमा गणतन्त्र गएको ११ वर्ष भएछ। तर, गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप राज्य सञ्चालनमा अझै केही कमी छ। सिंहले खोजेको गणतन्त्र ११ वर्ष पार गर्दैछ तर उनको सङ्गठन र विचारको नेतृत्वकर्ताको कमी छ।
सिंहको विरासत सम्हाल्ने नेताअगाडि आउन नसकेको अवस्था छ। सन् १९७६ मा उनले स्थापना गरेको नेपाल जनवादी मोर्चा इतिहास बनेको छ। उनको नाममा 'रामराजाप्रसाद सिंह स्मृति प्रतिष्ठान' डा. बाबुराम भट्टराई र सिंहका छोरा मनोज सिंहले चलाउँदै छन्।
सिंहको निधनपछि एक्लिएका छोरा मनोज सिंहले केही दिनसम्म जनवादी मोर्चालाई चलाउने प्रयास गरे। तर, सफल भएनन्। उनलाई तात्कालीन माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीमा समाहित हुन आग्रह गरे।
मनोजसँग भट्टराईले भनेका थिए,'अब नेताजी रहनु भएन। हामी उहाँको विचारधारालाई मानेर अगाडि बढेका छौँ। अब आउनुस् हाम्रो पार्टीलाई नेतृत्व दिनुस्।' त्यसपछि मनोज सिंह माओवादीमा लागेका थिए। तर, बाबुराम आफैँ माओवादीमा टिक्न सकेनन्। सिंह पनि उनीसँगै लागे र पुनः उनी माओवादीमै फर्किए। अहिले माओवादीका तर्फबाट नेकपामा उनी प्रदेश २ का विधायक छन्।
सिंह भन्छन्, 'गणतन्त्र पहिलोपटक आयो। तर, मान्छे त्यही पुराना नै छन्। राजतन्त्र र संवैधानिक राजन्त्रका पालाका व्यक्तिहरू छन्। त्यस कारण धेरै उपलब्धि भएको मान्न सकिँदैन।'
'नयाँ पुस्ता आउँदै छन्। उनीहरूले गणतन्त्रको मर्म बुझ्नेछन् र बढाउनेछन्', सिंहले भने, 'गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता आयो। कार्यान्वयनमा टाइम लाग्छ।'
भयो त रामराजाको सम्मान?
'नेपाली जनता जुन समयमा गणतन्त्रको उच्चारण गर्न डराउँथे। त्यस बेला खुला रूपमा उहाँले गणतन्त्रको उद्घोष गर्नुभयो। राजाको विरोधमा बोल्न नसक्ने अवस्था उहाँले चुनौती दिनुभयो', मनोज भन्छन्, 'त्यस बेला उहाँको मार्गदर्शनबाटै नेपालीहरू रैतीबाट नागरिक भएका छन्।'
रामराजाप्रसाद सिंह पदको लोभी थिएनन्। उनलाई राजाले कैयन् पटक देखाए। उनीले गणतन्त्रको मुद्दा छाडेनन्। मनोज भन्छन्, 'तर, गणतन्त्र आएपछि उहाँले कुनै सम्मान पाउनुभएन।'
सिंहलाई गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने प्रयास भएको थियो। सिंहकै जिल्लामा जन्मिएका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असहयोग गर्दा उनी राष्ट्रपति बन्नबाट रोकिए।
'उहाँले उठाएको एजेन्डा र उहाँको योगदानले मुलुक यहाँसम्म आइपुग्दा जुन सम्मान उहाँले पाउनु पर्ने थियो। राज्यले त्यस्तो दिएको जस्तो लाग्दैन', मनोजले भने, 'सायद अबको नयाँ पुस्ताले रामराजा प्रसाद सिंहलाई थप सम्मान दिनेछ कि?'
भारत, गणतन्त्र र मोदी
भारतमा इन्दिरा गान्धी रहुन्जेल रामराजाप्रसाद सिंहसँगको सम्बन्ध राम्रो थियो। गान्धीले गणतन्त्रको भावना बुझेकी थिइन्। तर, इन्दिरा गान्धीपछिका नेताहरूले नेपालमा दुई पिलरको कुरा गर्न थालेपछि रामराजा र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको सिंह बताउँछन्।
'म पनि भारतीय केही नेताहरूसँग बुबासँगै गएर भेटेँ। उनीहरूले 'टु पिलर सिस्टम' भनेका थिए। संवैधानिक राजतन्त्र भनेका थिए। त्यसमा बुबा सहमत हुनु भएन। त्यस कारण भारतसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिँदै गएको थियो। भारतीय स्वतन्त्रताका लागि बुबाले योगदान दिनुभयो तर भारतले उहाँलाई सहयोग गरेन। त्यस कारण पछिल्लो समय सम्बन्ध खासै राम्रो थिएन', उनी भन्छन्।
अहिले भारतमा भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जितेपछि नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त भइरहेको छ। मनोज त्यस्तो आशंका नगर्न आग्रह गर्छन्।
'मोदीले नेपालमा राजतन्त्रलाई सहयोग गर्ने सम्भावना छैन। पुराना राजावादीहरूले आशा राख्लान्। तर, नेपालमा तीनवटै चुनाव मोदीकै पालामा भएको हो। राजालाई फर्काउने विचार भएको भए चुनावमै खेल्थे होला तर त्यस्तो भएन', मनोजले भने, 'हिन्दुत्वको विचार छ मोदीमा । तर मोदी जनताविरुद्ध जान सक्ने छैनन्।'
'मोदी आफै‌ँ‌ गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री हुन्। त्यस कारण उनले राजतन्त्र आउँछ भनेर भन्दैन। हामी पनि बदनाम हुन्छौँ भन्ने कुरा मोदीलाई थाहा छ। भारतको कुनै पनि पक्ष नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा छैन', मनोजले भने।
ज्ञानेन्द्र मन्दिर-मन्दिर जाँदैमा राजतन्त्र फर्किँदैन
गत चैत पहिलो साता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मधेस यात्राका क्रममा रामराजा प्रसाद सिंहको जन्मस्थल सप्तरी पुगेका थिए। उनले छिन्नमस्ता भगवतीको दर्शन गरेका थिए। त्यसअघि उनले मधेस र पहाडका कयौँ मन्दिरको दर्शन गरे।
उनको यात्रा धार्मिक देखिए पनि राजनीतिक सक्रियता प्रस्टै थियो। विभिन्न दलका नेता तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूसँग उनको भेटघाट भएको थियो। उनका समर्थकहरूले 'राजा आउ देश बचाउ' को नारा लगाएका थिए। जस कारण ज्ञानेन्द्र हौसिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताबारे मनोज भन्छन्, 'ज्ञानेन्द्र शाह मन्दिर-मन्दिर जाँदैमा राजतन्त्र फर्किँदैन। गणतन्त्रको अपहरण हुन सक्दैन। राजतन्त्र बचाउनु थियो भने गणतन्त्र घोषणाअघि नै बचाउन सक्थे। अहिले सम्भव छैन।'
'जनताले चाहेपछि अरूले रोक्न सक्दैन', मनोजले भने, 'जनताले रामराजा प्रसाद सिंहको विचार रुचाए। गणतान्त्रिक मन पराए। अब राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने कुरा कसैले नसोचे हुन्छ।'